भारतको उत्तर प्रदेशमा अज्ञात ज्वरोका कारण ५० भन्दा बालबालिकाको मृत्यु – Health Post Nepal
भारतको उत्तर प्रदेशमा अज्ञात ज्वरोका कारण ५० भन्दा बालबालिकाको मृत्यु
२०७८ भदौ १६ गते १४:३७
उत्तर प्रदेशमा अधिकांश बालबालिकासहित गत साता कम्तीमा ५० जनाको ज्वरोले मृत्यु भएको छ।
नेपालसँग जोडिएको भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशका केही जिल्लामा एक साताभन्दा बढी समयदेखि बालबालिकाहरू उच्च ज्वरो आउने र पसिनामा भिजेर बिउँझिने समस्याबाट पीडित छन्।
तीमध्ये धेरै जनामा जोर्नी दुख्ने, टाउको दुख्ने, शरीरमा पानी कम हुने र रिँगटा लाग्ने लक्षण देखिएको छ। केहीको भने हातखुट्टामा डाबर आएको पाइन्छ।
उत्तर प्रदेशभित्र पूर्वतिरका छ जिल्लामा अधिकांश बालबालिकासहित कम्तीमा ५० जनाको ज्वरोले मृत्यु भएको छ भने केही सय बिरामी अस्पताल भर्ना भएका छन्। मृत्यु भएका कसैलाई पनि कोभिड भएको थिएन।
कोरोनाभाइरसको घातक दोस्रो लहरबाट भारत बिस्तारै मुक्त हुँदै गरेको समयमा उत्तर प्रदेशमा भएको मृत्युलाई सञ्चारमाध्यमहरूले अज्ञात ज्वरोूले भारतको सबैभन्दा सघन बस्ती भएको राज्यका गाउँहरूलाई आक्रान्त पारेको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, कासगन्ज र फिरोजाबादका चिकित्सकहरू मृत्युको मूल कारण लामखुट्टेबाट सर्ने भाइरसको संक्रमण डेङ्गी भएको विश्वास गर्छन्।
उनीहरूका अनुसार धेरै बिरामीहरू रगत जमाउन सहयोग गर्ने एक प्रकारको रक्त कोष प्लेट्लेटको सङ्ख्या कम हुने अवस्थामा भर्ना गरिएको बताउँछन्। यो लक्षण डेङ्गीमा गम्भीर बिरामीहरूमा देखिन्छ।
‘अस्पताल आएका बिरामीहरू विशेषगरी बालबालिकाहरूको निकै छिटो मृत्यु भइरहेको छ,फिरोजाबाद जिल्लाका वरिष्ठतम चिकित्सक डा. नीता कुलश्रेष्ठ भन्छिन्,‘ फिरोजाबादमा गत साता ३२ बालबालिकासहित ४० जनाको यही समस्याका कारण निधन भएको थियो।’
पोथी लामखुट्टेले सार्ने उष्णप्रदेशीय रोग डेङ्गी भारतका सयौँ वर्षदेखि छ। विश्वभरि १०० देशमा देखिने यो रोगका ७० प्रतिशत बिरामी एशियामा हुन्छन्। डेङ्गीका चार भाइरस छन् र दोस्रो पटक संक्रमण हुँदा बालबालिकाको मृत्यु हुने सम्भावना वयस्कमा भन्दा पाँचगुना बढी हुन्छ।
डेगी सार्ने लामखुट्टेले घर वरपर सफा पानीमा प्रजनन गर्छ। ‘मानिसले यो लामखुट्टेको प्रजनन स्थान बनाउँछन् र मान्छेले मात्रै त्यसलाई कम गर्न सक्छन, लामखुट्टेबाट सर्ने भाइरसविज्ञ डा. स्कट हाल्स्टीड भन्छन्।
प्रत्येक वर्ष विश्वभरि डेङ्गीबाट १० करोड मानिस गम्भीर बिरामी पर्छन्। ‘कोभिड–१९ र डेङ्गीको एकीकृत असर जोखिमका रहेका जनसख्यामाथि ज्यादै विनाशकारी हुनसक्छ,’विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएको छ।
तर भारतको उत्तर प्रदेशमा देखिएको ज्वरोसम्बन्धी मृत्युको कारण डेङ्गी भए नभएको स्पष्ट छैन।
बीस करोड जनसंख्या भएको राज्यमा कमजोर फोहोर व्यवस्थापन, धेरै बालबालिकामा कुपोषण र फितलो स्वास्थ्य सेवाका कारण बर्सेनि वर्षा यामपछि अज्ञात ज्वरोका बिरामीहरूको खबर आउँछ।
लामखुट्टेकै कारण हुने जापानिज इन्सेफलाइटिसका कारण उत्तर प्रदेशमा सन् १९७८ यता ६,५०० जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो रोग विशेषगरी गोरखपुर र नेपालसँग सीमा जोडिएका स्थानबाट फैलने गरेको छ। नेपालका बाढीग्रस्त क्षेत्रहरू यो रोग सार्ने लामखुट्टेको वासस्थान हो।
यस्ता छन् लुम्बिनी प्रदेशबाट विभूषित हुने स्वास्थ्यकर्मीका काम